သင့်ရဲ့ အိပ်ယာထဲထိ လိုက်ပါကူညီမယ့် ဘောလုံးသမားက ဘယ်သူများလဲ — Sports Myanmar
သင့်ရဲ့ အိပ်ယာထဲထိ လိုက်ပါကူညီမယ့် ဘောလုံးသမားက ဘယ်သူများလဲ
February 17, 2019 - by Edi Tor
အမျိုးသား တစ်ဦး နဲ့ အမျိုး သမီး တစ်ဦး တို့ ချစ်တင်းနှော ဖလှယ်နေ တဲ့ အချိန် မှာ ခေါင်းထဲ ကို အတွေး တွေ ၀င်ရောက် လာတတ် ပါတယ် ။ ဒီ အထဲ က အတွေး အတော်များများ ဟာ ဘောလုံး သမား တွေ ဖြစ် နေတာ တကယ် ကို ထူးဆန်း အံ့သြ ဖွယ် ရာ ပါပဲ ။ စစ်တမ်း တွေ အရ လူ ၄ ယောက် မှာ တစ် ယောက် ( အမျိုးသမီးများ ) ဟာ ချစ်တင်းနှီးနှော နေတဲ့ အချိန် အတွင်း ဘောလုံး သမား တွေ ရဲ့ အကြောင်းကို တွေးတော နေကြတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ချစ်တင်းနှောတဲ့ ကိစ္စ နဲ့ ဘောလုံး သမား တွေ ဘယ်လို သက်ဆိုင် နေ ပါသလဲ ။ သက်ဆိုင် တယ် လို့ ပြောရရင် ငြင်းဖို့ လည်း ခက်ခဲ နိုင် ပါတယ် ။ တည်ကြည် တဲ့ ရုပ်ရည် ရူပကာ ၊ ရဲရင့် တဲ့ ဟန်ပန် ၊ ကြံ့ခိုင် တဲ့ ကြွက်သား အပြိုင်းပြိုင်း နဲ့ အားမာန် အပြည့် ပါဝင် တဲ့ အော်ဟစ် ကြုံးဝါးသံ တွေ ဟာ အမျိုးသမီးတွေ အဖို့ မိမိ ရှေ့ က ပုဂ္ဂိုလ်ကို ခေတ္တ မေ့ပျောက် စေဖို့ စွမ်းဆောင် စေနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
Real Madrid’s Portuguese forward Cristiano Ronaldo puts on his jersey after celebrating his goal during the first leg of the Spanish Supercup football match between FC Barcelona and Real Madrid CF at the Camp Nou stadium in Barcelona on August 13, 2017. (Photo by STRINGER / AFP)
ဘောလုံး သမိုင်း တစ်လျောက် မှာ ရုပ်ရှည် ချောမော ခန့်ငြား ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာ အချိုး အစား တောင့်တင်း လှပ တဲ့ ဘောလုံး စတားတွေ အများ အပြား ရှိခဲ့ ကြ ပါတယ် ။ နှုတ်ခမ်းနီ မလေး တို့ ရဲ့ အသည်းစွဲ ကစား သမား တွေ ထဲ က အချို့ ကတော့ အိပ်ယာ ပေါ် က ချွေးထုတ်ပွဲ အထိ ပါဝင် ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ခဲ့ ကြပါတယ် ။
ပျိုမေတို့ ရဲ့ စိတ်ကူး ပုံရိပ် အဖြစ် အများဆုံး ပါဝင် ခဲ့တဲ့ သူက တော့ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တတ် နဲ့ အင်္ဂလန် ဖရီးကစ် စပါယ်ရှယ်လစ် ဒေးဗစ် ဘက်ခမ်း ဖြစ်တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။ အင်္ဂလန် က အမျိုး သမီး ၂၀၀၀ ကျော် ကို စစ် တမ်း ကောက်ယူ ခဲ့တာ ဖြစ် တာ ကြောင့် ဘက်ခမ်း ဟာ နံပါတ် ၁ ဖြစ်နေ ရတယ် လို့ ပြောဆို လို့ ရနိုင် ပေမယ့် ဒေးဗစ် ရဲ့ တည်ကြည်ခံ့ညား မှု ကိုတော့ လစ်လျှူ ရှုလို့ မရနိုင် ပါဘူး ။
ဒုတိယ နေရာ မှာတော့ ဘောလုံး သမား တစ်ယောက် အတွက် အပြီးပြည့်စုံဆုံး ခန္ဓာကိုယ် ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတယ် လို့ သတ်မှတ် ခံ ထား ရတဲ့ ဂျုဗင်တပ် နဲ့ ပေါ်တူဂီ တိုက်စစ် မှုး ကြီး ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို က ရပ်တည် နေခဲ့ ပါတယ် ။
Free Super Tips က ပြုလုပ် ခဲ့တဲ့ အဆိုပါ အစီ အစဉ် မှာ ပါဝင် ခဲ့ တဲ့ ပျိုမေ တွေ ဟာ ချစ်တင်းနှော ချိန် အတွင်း သူတို့ ရဲ့ အတွေးထဲ မှာ ပေါ်ပေါက် လာတဲ့ ကစား သမားတွေ ရဲ့ အမည်တွေ ကို ဖွင့်ဟ ပြောဆို ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ဒီအထဲ မှာ ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်မှုးကြီး အိုလီဗာ ဂျီရူး ၊ ဂါရတ်ဘေးလ် ၊ ပီကေး ၊ ဒီဂီယာ ။ ဒိုင်ဘားလား ၊ ဘူဖွန် ၊ စတုန်း ၊ ဗန်ဒိုက် စတဲ့ ကစား သမားတွေ ဟာ ဘက်ခမ်း နဲ့ ရိုနယ်ဒို တို့ ပြီးပါက ပျိုမေ တို့ အရွေးချယ် ဆုံး အမည်တွေ ဖြစ်ကြပြီး မက်ဆီ ၊ အဂွေရို ၊ စတာလင် ၊ ရက်ဖိုဒ့် ၊ ဟာဇက် တို့ ကိုလည်း စိတ်ကူး မိခဲ့သူ တွေ ရှိ ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
နောက်ထပ် စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု တွေ အရ အမျိုး သား ထုရဲ့ ၂၀% ဟာ သူတို့ အားပေးတဲ့ အသင်းတွေ ရှုံးနိမ့် တဲ့ ညတွေ မှာ ချစ်သူတွေ နဲ့ အတူ ချစ်တင်းနှောခြင်း မရှိ ကြဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ချစ်သူတွေ အတွက် အသင်း ပြောင်းအားပေး တဲ့ ပုရိသ အရေ အတွက် ကတော့ ၁၀% သာ ရှိတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ဘောလုံး ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ၃ ပုံ တစ်ပုံ ဟာ ချစ်သူနဲ့ အတူ အိပ်စက် ရတာ ထက် သူတို့ အားပေး တဲ့ အသင်း တွေ ဖလား ရ အောင်ပွဲ ခံတာ ကို မြင်တွေ့ လို ကြောင်း လည်း စစ်တမ်း မှာ ဖော်ပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
မြန်မာပြည်က ပရိသတ်ကြီးတို့ ရဲ့ ဘောလုံး အသင်း နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ လူနေမှု ဘ၀ တွေ က ရော ဘယ်လိုမျိုး လဲ ဗျ . . သိချင် မိပါရဲ့ . .